Smart & Healthy Lifestyle အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု Amazfit Smart Watch (GTR 3, GTS 3) ~ The ICT.com.mm Blog
Smart & Healthy Lifestyle အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု Amazfit Smart Watch (GTR 3, GTS 3)
Smart Watch လှလှလေးတစ်လုံးကို ရေစိုခံနိုင်တဲ့ကွာလတီ 5ATM ၊ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့မျက်နှာပြင်၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်စနစ်၊ အသံနဲ့ခိုင်းလို့ရမယ့် Alexa Voice Assistant တို့အပြင် နေ့တိုင်းအားသွင်းစရာမလိုဘဲ ရက်ရှည်အားခံတဲ့ဘတ္ထရီနဲ့ လိုချင်ရင် ဒီ Amazfit Smart Watch လေးတွေက သင့်အတွက်ပါပဲ။
စတိုင်ကျပြီး ပေါ့ပါးအကြမ်းခံတဲ့ အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းလှလှပေါ်မှာ Ultra HD AMOLED Display မျက်နှာပြင်ကိုဆင်ပေးထားလို့ တောက်ပတဲ့နေရောင်အောက်မှာတောင် ကြည်ကြည်လင်လင် ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ နာရီမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပြီးတော့ ကိုယ့်ပုံ/ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူပုံကိုလည်း Background ထားလို့ရပါတယ်။
BioTracker PPG 3.0 Biometric Sensor က နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင် စတဲ့အချက်အလက်တွေကို တပြိုင်နက်တိုင်းတာပေးနိုင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်မျာပါ။ Fitness နဲ့ Workout သမားတွေအတွက်အရမ်းအသုံးတည့်တဲ့ Tracking နဲ့ Recognition System တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ App တွေကို Zepp OS နဲ့သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Alexa Voice Assistant ပါဝင်တဲ့အတွက် ရာသီဥတု၊ Calendar ၊ Phont Notification, Message စတဲ့အချက်အလက်တွေကို Voice Command နဲ့ အသုံးပြု/ကြည့်ရှုနိုင်ဦးမှာပါ။
Fitness Guys တွေအတွက် Amazfit GTS3လေးက ပိုသင့်တော်ပြီးတော့ General Usage နဲ့ ဘတ္ထရီအားပိုခံတာကိုလိုချင်ရင် Amazfit GTR3လေးကပိုပြီးတော့ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။
Shop here » https://bit.ly/33cKdbF
Amazfit GTR3Smart Watch Global (Black)
Shop here » https://bit.ly/3nkvFxI
Amazfit GTR3Smart Watch Global (Gray)
Shop here » https://bit.ly/3tkYZb2
We accept 100% all banking/mobile payments and 5% cash back for cash payment.
#AYAPay, #CBPay, #KBZPay, #OnePay, #WavePay, #Visa, #MasterCard, #MPU, #UnionPay, #JCB are accepted.
Shop on Messenger: https://m.me/ICT.com.mm
Viber: 0942 000 4551
Call our Customer care team : +95 (0) 9765 441 707/ 709/ 710
Call Delivery team : +95 (0) 9765 441 708
#ShopICT #Myanmar #Amazfit #SmartWatch #GTR3 #GTS3
Newer Gamer တွေကို အမြဲတမ်းသက်တောင့်သက်သာနဲ့လန်းဆန်းနေစေမယ့် Cooler Master ရဲ့ Gaming Chairs
Older ICT ရဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေ Customer များအတွက် ပရိုမိုးရှင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ